Xayawaan - Gpedia, Your Encyclopedia
Xayawaan (Af Ingiriis : animal; Af carabi: حيوان) waa noole ka mid ah noocyada noolaha. erayga "xayawaan" wuxuu ka yimid Af Carbeedka, dhiggiisa Af soomaaligana waa "bahal". Bahalladu wey kala duwanyihiin. Qaarkood waxay ku noolyihiin dhulka dushiisa, qaarna waxay ku noolyihiin badaha iyo wabiyada. Jaad ka mid ah bahallada waxay awoodaan in ay ku noolaadaan bad iyo berriba, sida raxa (halkani bad waxaan ula jeednaa biyaha).
Waxaa kaloo jira bahallo ku nool jirka aadanaha dushiisa inkastoo aysan isha qabanin. Bahallahan badankood waxay ku noolyihiin unugyada dhintay ee maqaarka.
Sideedaba, Soomaalida bahal waxay u taqaanaa wax kaste oo aan Aadane ahayn, balse ogoow Aadanahu waa bahal, waxa kaliya oo ka duwa bahallada kale waa garaadka.
Marka la abla-ablaynayo bahallada, waxaase ugu horeyn loo kala qeybiyaa laba jaad: Beri-joog (Dhul-joog) iyo Bad-joog. Waxaa lagu qiyaasaa in noocyada xayawaanka intiisa badani ku nooshahay badaha iyo wabiyada dunidan.
Marka la sii kala saarayo qeybaha xayawaanka waxaa loo qeeybiyaa shan qeybood:
Ri'yuhu waa Naasleey
1- Naasley: waa dhamaan xayawaanka awooda u leh in eey dhalaan ilmo nool isla markaana jaqsiiyaan caanaha naaska. Jaadkan waxaa ka mid ah Aadanaha.
2- Xamaarato: waa xayawaanka ku socda bogga ama caloosha. Waxaa ka mid ah maska, jabisada IWM. Waxay dhalaan ukun mudo ka dib isku bedesha ilmo.
3- Shimbiro: waa qeeyb aad u tiro badan oo ka mid ah xayawaanka. Waa bahallo awood u leh inay dhex maraan hawada iyagoo isticmaalaya baalashooda. Waa xayawaan ku dhaqan dunida dacalladeeda isla markaana ukala qeybsamo jaadad farabadan. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah digaaga, haadka, goronyada, qambaarka, qooleeyda IWM.
4- Beri-Biyood: Beri-Biyood waxaa loo yaqaanaa xayawaanka nooc ka mid ah oo awood u leh inuu ku noolaado Beriga (oogada dhulka) iyo badaha ama biyaha dhexdooda. Waa xayawaan qaab sameeyskiisu taageerayo inuu ku dhex neefsado dhulka iyo biyaha hadba kii uu joogo. Bahalada noocan ahi aad uma tiro badna marka loo eego qeeybaha kale ee xayawaanka. Waxa ka mid ah Rah'a (frog), Yaxaaska (crocodile) IWM
5- Cayayaan: Cayayaanka waa qeyb ka mid ah xayawaanka oo aad uga yar-yar qeybaha kale. Sidoo kale waxaa la sheegaa inaanay dhiig lahayn dhamaan cayayaanku, midaasi oo ka dhigeysa qeyb aad uga duwan dhamaan xayawaanka intiisa badan ee ku dhaqan oogada dunida. Asc
Boodey, wuxuu ahaa faraskii Ismaaciil Mire.
↑ Huber M, Knottnerus JA, Green, L., van der Horst H, Jadad AR, Kromhout D, Smid H. BMJ 2011; 343 (d4163) http://savenhshomeopathy.org/wp-content/uploads/2012/09/Huber-Definition-Health-BMJ-21.pdf
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xayawaan&oldid=201296"